फेरी गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री बन्ने ! – Life Nepali
फेरी गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री बन्ने !
काठमाडौं। ७० करोडको कमिशनको डिल गरेको अडियो प्रकरणमा सञ्चार तथा, सूचना प्रविधि मन्त्रीबाट रा’जीनामा दिएका गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा निर्दोष सावित भए पूनः सोही जि’म्मेवारीमा, फ’र्किने भएका, छन् । प्रधानमन्त्री केपी, शर्मा ओलीले समेत यो प्रकरणबारे अडियो, नै नक्कली, हुनसक्ने भन्दै, बाँस्कोटाको बचाउ, गरेका थिए । बाँस्कोटाको अडियो, प्रकरणले चौतर्फी सरकारमाथि प्रहार, र विरोध, हुँदासमेत प्रधानमन्त्री ओलीले उनको बचाउ गरेका थिए ।उनले, बाँस्कोटामाथि ग’म्भिर, आ’रोप लागेकोले राजीनामा दिएको बताएका थिए ।
यो बीचमा बाँस्कोटाले आफूमाथि गा’ली बेई’ज्जति भएको भन्दै जिल्ला अदालत काठ’माडौंमा मि’श्रवि’रुद्ध मु’द्दासमेत दर्ता गराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि बाँ’स्कोटा यो प्रकरणमा’ नि’र्दोष सा’वित भए’ भने उनलाई’ नै पूनः पूरानै जिम्मेवारीमा ल्याएर विपक्षीहरुलाई जवाफ, दिनसक्ने पनि गाँईगुँई चलेको छ ।उता, बाँस्कोटाको प्रकरणमा नेकपाका नेता विष्णु रिजालले समेत यो प्रकरणमा बाँस्कोटा दोषी, नभएको संकेत गरेका छन् । उनले आजमात्रै आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै बाँस्कोटाको बचाउ गरेका छन् ।
Previous होलीको टीसर्ट १ रुपैयाँमा !
Next नेपाल आएकी विश्व सुन्दरी टोनीले भनिन्- ‘जिउँदैमा स्वर्ग देखियो नेपाल साँच्चै सुन्दर रहेछ’